Bird ကိုသခွေငျးတရား - ကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြ&# | Apg29
985 online! | Sidvisningar idag: 64 887 | Igår: 234 627 |
Bird ကိုသခွေငျးတရား - ကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြ&#
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌နေထိုင်နေကြသည်! 8000 မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်၏ထွက်သေကြ၏။2သန်းငါးသေကမ်းခြေကိုဆေးကြော!
အဆိုပါစာရင်းဇယားငါကငှက်တို့သည်လည်းကောင်းကင်မှသေလွန်သောသူတို့သည်ထိ မိ. လဲသောကမျြးစာ၌တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လျှင်သူတို့လျှောက်ထားပြီးနောက်လူဦး apg29 တွေ့ကြပြီကြောင်းမြင်ကြပြီ။ အဘယ်သို့ငါဒါကြောင့်အသေကောင်သောငှက်များနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမကပြောပါတယ်သိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ 8000 (ရှစ်ထောင်) ခို Faenza ၏အီတလီမွို့၌ကောင်းကင်မှသေကြ၏, ဒါကြောင့်သင်ကကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေကြောင်းသိနားလည်ရန်များစွာစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် ကျနော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌နေထိုင်နေကြသော။ - ပထမသူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာတဆယ်နှစ်ဆယ်ကိုကဲ့သို့အများအပြားချ thumped ထို့နောက်တလာ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖြစ်ပျက်, ကျနော်တို့မျက်မြင်တစ်ဦးကပြောသည်ကြောင်း Aftonbladet read ဘယ်ကြောင့်မစိတ်ကူးရှိသည်။ Arkansas ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ပြည်နယ်များတွင် 3000 မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်။ တွေ့ရှိရ 70 ဦးသေကောင် jackdaws ပတ်လည်ဆွီဒင်၌သေခြင်းနှင့်Falköpingအတွက်သိရသည်နှစ်သန်းငါးသေဘို့အတက်ကိုဆေးကြောသည့်အတိုင်း မေရီလန်းပြည်နယ်အတွက်ဒါကျနော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီအတှေ့နိုငျ:
ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်ပင်လယ်ပေါ်မှာမိမိဖလားကိုသွန်းလောင်းလျှင်, ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်သေ၏တူကိုအသွေးသို့လှည့်နှင့်ပင်လယ်အပေါင်းတို့၌အသက်တာကိုအနိစ္စရောက်လေ၏။ (ဗျာဒိတ် 16: 3) ။
- ဇန်နဝါရီလ 3, မေရီလန်းပြည်နယ်အတွက် Chesapeake Bay တွင်၏ကမ်းခြေပေါ်တက်ကိုဆေးကြောနှစ်သန်းပြောက် croaker (Leiostomus xanthurus) စတင်ခြင်း, Aftonbladet ရေးသားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုတစ်နှစ်သို့ ဝင်. ကြပါပြီ - 2011 ခုနှစ်နှင့်များစွာသောဖြစ်ကောင်းကယခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ပျက်သွားသောအမှုအရာကိုအံ့ဩနေကြတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်းအများအပြားသမ္မာကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်၏တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကအရာတစ်ခုမှာကိုယ့်စကားမှန်သည်ရောက်လိမ့်မည်အံ့အားသင့်မဖြစ်မညျ! ငါ့အဆွေခင်ပွန်း: ယရှေုသညျအလှနျအမကြာမီပြန်ကြွရှိ၏! Read more:
"လမ်းမအလယ်၌သေငှက်ရာပေါင်းများစွာ" Falköpingsbon Drilon ခဲသူတို့၏မျက်စိကိုမယုံနိုင်တော့
"ကတူမျှမမြင်ဘယ်တော့မှ" Falkirk အတွက်, ငှက်သေဆုံးမှုအပေါ် ornithologist Kent-Ove Hvass
US မှာ Bird ကိုသေဆုံးမှုပြန့်ပွားစေသည် "ပြည်တွင်းဒဏ်ရာသွေးခဲဖြစ်ပေါ်" ။
ယူနိုက်တက်မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နောက်တဖန်ကောင်းကင်မှပြုတ်ကျ 100 က 000 ငါးသေ Arkansas ပြည်နယ်အတွက်ပွင့်ကိုဆေးကြောနှစ်ဦးစလုံးငှက်နှင့်ငါးကိုပြည်နယ်အတွက်နှစ်သစ်ကူးညဥ့်နေစဉ်အတွင်းသေဆုံး
ဒါ့အပြင်ဖတ်ရန်: တစ်ဦးက B ကို, မိသားစုဆရာဝန်, SvD, ထွ
Zapad 17:01 ရုရှားစည်းရုံးခြင်းလား?
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မည်ရုရှားစစ်ဘက်လေ့ကျင့်ခန်း Zapad 17. စတင်ခဲ့ပြီလော ရုရှားကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနိုင်ငံများတွင်ဆန့်ကျင်ဒဏ်ခတ်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ကြမည်နည်း မေးခွန်းမေးရန်တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် ဒါဝိဒ်သည်ခ
နောက်ထပ်ထွက်ပေါက်ကလူဘုရားသခင်ထံမှထွက်ပြေးလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအပြစ်တရားဟုခေါ်တွင်ပါတယ်။ သိန်လူနှင့်ဘုရားသခင့ကြားရှိသဟာယဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ထံမှလွတ်မြောက်ရန်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည် "ငါတို့ရှိသမျှသည်သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲခဲ့သီးအသီးမိမိလမ်းသို့လိုက်လေ၏" ဟရှော 53: ။ 6
သို့သျောလညျးအန္တရာယ်များတဲ့ဟာရီကိန်းကမ္ဘာကြီးကိုသက်ရောက်သည်။ ဟာရီကိန်းမာရီယာအလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒါဟာအခု Category:5ဟာရီကိန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမျြးစာကဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်ထာဝရကြောင်းရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်, ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းကင်ပြာကိုအစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဘယျသို့ရာအရပျထာဖြုန်းမလဲ
3 မယားများနှင့် 16 ကလေးများနှင့်အတူလူသား 14 သ
ရုပ်ပုံ: samnytt.se ။
Nacka မြူနီစီပယ်မယားသုံးယောက်နှင့် 16 ကလေးတွေနဲ့အတူဆီးရီးယားဖွားသောသူသည်ရန်နီးပါး 14 သန်းများအတွက်သုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားဖျက်ဆီးဖို့ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။ Photo: Express ကို။
ကုလသံအမတ်ကြီး Nikki Haley မှတဆင့်အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားဖျက်ဆီးဖို့ခြိမ်းခြောက်နေသည့်အခါဒါဟာနျူကလီးယားစစ်ပွဲ၏ခြိမ်းခြောက်ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် အန်ဒီ Svensson
Vecka 38, torsdag 21 september 2017 kl. 07:11
အစ္စလာမ်ဘာသာ - အကြမ်းဖက်မှု, မုန်းတီးမှုƛ
မွတ်စလင်ဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျးဖယ်ရှားပစ်ရရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ တကယ် 100% အလုပ်လုပ်ပါတယ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသခင်အဖြစ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် ဂျော်နီ Haglund
ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ပင်ယေရှု၏ထိုအချိန်က script ကိုတတျနိုငျသ, ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါ် blinders ခဲ့သညျယရှေုသူကိုမမွငျနိုငျသညျ။ သူတို့သညျယရှေုသူတွေ့မြင်သို့မဟုတ်နားမလည်နိုင်အောင်သူတို့လက်ျာဘက်အရာအားလုံးအနက်ဒါဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ခဲ့ကြသည်။
US မှာ Mormonism ကြားတွင်အင်ဒီးယန်းများနှင့်ယုဒလ
Christer Åberg - တည်ထောင်သူ Apg29.nu
ငလျင်, ဆူနာမီ, ဟာရီကိန်းနှင့်စစ် - သညျယရှေ
Nenne နှင့် Toye အတူ Mysen, နော်ဝေအတွက်တွေ့ဆုံ
အဆိုပါ Mormonism ဘုရားကျောင်းယရှေုသညျမာရျနတျ၏ည